China Ndị na-emepụta mkpụrụ osisi aprịkọt | Ihe nketa
Akwukwo achicha ohuru sitere na Baoding obodo nke Hebei anakpo n'ihi uto ha di uto ma di uto.
Agba aja aja nke mkpụrụ osisi chara acha gbanwere na oroma chara acha. Ọ mara mma n’anya gị.
Ihe nketa nri eji aprịkọt dị elu eme ihe site na itinye oyi na mmiri sirop dị ala, hụ na acidity na isi na-esi isi ụtọ pụrụ iche. A na-agbanye ya na ntụ ntụ shuga ntakịrị, na-atọ ụtọ ma na-abụghị nke nnyapade.
Ogologo oge ole ka aprịkọt akpọnwụ ga-adịru?
Buru n'uche na ị nwere ike idobe ha na pantiri ma ọ bụ friji maka ọnwa 6 ruo 12. Y’oburu na friza ha, ha nwere ike ijide gi onwa iri n’abuo rue iri na asato. Ihe dị mkpa icheta bụ ịchekwa aprịkọt a mịrị amị na nkụ, ebe dị jụụ. Iji mee ka mkpụrụ osisi aprịkọt mebiri emebi mgbe ọ mepechara, tinye ya na akpa rọba dị arọ ma ọ bụ na akpa ikuku, a na-ekpuchichi ya.
Ihe nchekwa ọzọ bụ ịkwakọ aprịkọt na 'serving size' tupu ịchekwa ha na friza. Mgbe ị na-eme nke a, ị na-ewepụta ihe ịchọrọ n'oge ọ bụla. Nke a na - eme ka aprịkọt gị kpọrọ nkụ nwee ike iru ọnọdụ ụlọ ngwa ngwa ma debe mkpụrụ gị ndị ọzọ a mịrị amị ka a wepụ ha na ebe nchekwa ha. Chekwa aprịkọt n'otu n'otu ga-ejide n'aka na ị naghị emechi ma ọ bụ mepee akpa ahụ, nke nwere ike ikwe ka ikuku banye ma mee ka usoro mmebi na ịkpụzi ngwa ngwa.
Aprịkọt dị mma ma na-atọ ụtọ, ma mkpụrụ osisi aprịkọ ọhụrụ na nke a mịrị amị bara uru. Mgbe ị na-echekwa aprịkọt akpọnwụ, enwere uru ndị ọzọ - usoro ihicha dị mfe ma ha dị mfe ịchekwa.
Anyị Company nyere China Akọrọ Mkpụrụ, Chebe Mkpụrụ, Naa anyị na ngwaahịa na-ere ihe niile anụ ụlọ na mba ọzọ ekele maka mgbe na ọhụrụ ahịa na-akwado. Anyị na-eweta ngwaahịa dị elu na asọmpi asọmpi, nabata ndị ahịa ọhụrụ na ndị ọhụrụ na-akwado anyị!
Nke gara aga: Agba odo
Oven Dịrị apụl
Rehydrating Akọrọ Aprịkọt
Chekwa Achịcha Akọrọ